Iksu aadka wareega Sideeda Copa del rey oo la sameeyey.
Home Horyaalka Spain Iksu aadka wareega Sideeda Copa del rey oo la sameeyey.
Waxaa la sameeyey isku aadka wareega sideeda Copa del rey xilli kulamo xiiso badan ay kasoo baxeen iyada oo 16-kii kulan ee ugu dambeysay la dhameystiray, isku aadka wareega quarter-finalka Copa del Rey ayaa dhacay isku aadkiisa maanta oo Jimco ah Waxa ugu weyn ee wareega ayaa noqon doona Barcelona oo la ciyaareysa Granada.
Markii ugu dambeysay ee labadan koox ay kulmaan Barca ayaa ku soo baxday kaalinta koowaad iyagoo 4-0 kaga badiyay Estadio Nuevo de Los Cármenes.
Athletic Bilbao ayaa sidoo kale u safri doona Andalusia si ay ula kulmaan Real Betis Sevilla ayaa u ayaa ku beegmatay kooxda Segunda División ee Almería.
Ciyaarta ugu dambeysa waxaa ciyaari doonaan kooxaha Levante iyo Villarreal. Kulamadaani waxay dhici doonaan 2-da, 3-da iyo 4-ta Febraayo.
Previous articleLiverpool oo ku tartameysa adeega Kylian Mbappe.
Next articleWararka Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Caawa: Man City oo ku dhow Fluminense Kayky iyo Metinho iyo Qodobo kale